हिमालखबर विशेष केदार शर्मा
कुनै पनि समाजको मूल्याङ्कन त्यो समाज कस्ता कुरामा हाँस्छ भन्ने कुराका आधारमा सबभन्दा राम्ररी गर्न सकिन्छ।
गर्वको जीवन, सन्तुष्ट निधन
इन्द्रबहादुर राई सचेत रूपमा पौने शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म संसार देखेर, हेरेर, बुझ्ने प्रयास गरेर, देखे–बुझेका कुरालाई चिन्तनको रापले गालेर र ती कुरा हामीलाई सुनाएर, पढाएर जानुभयो।
यो मेरो टोपी हो…
धोती र टोपीको न तुलना हुनसक्छ न ती एकअर्काका विकल्प हुन्। एउटा कम्मरमुनि लगाइने, लाज ढाक्ने समेत प्रयोजनको बस्त्र हो, अर्को टाउको ढाक्ने। त्यसैले टोपी वा धोती भनेर तिनलाई ‘विरोधी खेमाका’ बनाउन जरूरी छैन।
मृत्यु नचिनी जीवन चिनिन्छ र? मङ्सीरको एउटा अपराह्न हामी गौरीकै बारे गफ गर्दै थियौं, मैले एउटा अनपेक्षित प्रश्न फ्याँकें, “२००४ सालमा गौरीको देहावसान भयो । २००५ मा नै तपाईंको अर्को विवाह भयो । घरमा नवविवाहित श्रीमती हुनुहुन्थ्यो । उहाँको उपस्थितिमा जेठी श्रीमतीको शोकमा त्यस्तरी डुब्न गाह्रो, अप्ठ्यारो भएन ?”
माघी आयो ! माघेसंक्रान्ति नेपालभर मनाइन्छ, तर ‘माघी’ थारूहरू मात्रको हो । दशैं मनाउनेका लागि ‘आश्विन शुक्ल दशमी’ र ‘दशैं’ भन्नुमा जति अन्तर छ, थारूका लागि माघेसंक्रान्ति र माघीमा त्यति नै अन्तर ।
भाषा–मिसनरी बर्क जसले सिक्न सिकाए नेपाली शब्दसागरमा खेल्ने उनको रहरले १९९० को मईदेखि अक्टोबरसम्ममा आकार र गति लियो । सन् १९९४ मा प्रकाशित ‘सही शब्द’ ले उनलाई नेपालको प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार ‘मदन पुरस्कार’ समेत जितायो ।
स्मृतिशेषमा यी कर्मशील यस पटक म आफूले जानेका, मानेका तीन व्यक्तित्वको निधनालेख लेख्ने परिबन्दमा परेको छु ।
एउटा पहाडेको छठ अनुभूति
मेरा मनमा छठका बारेमा प्रश्न मात्र छन्, यो लोकपर्वको सही इतिहास के होला ? छठी माईको परिकल्पना कसले ग‍र्‍यो होला ? यो हिन्दू कर्मकाण्डको प्रभाव पर्नु अघिदेखि नै यस भेकमा प्रचलित लोकपर्व हो त ?
धोती त कुरा थाल्ने मेलो मात्र हो, छठ पर्वमा मैथिल संस्कार अनुसार शिष्टाचारपूर्वक सहभागी हुन हामीले निकै कुरा सिक्नु छ । सिकाइदिन केही साथी तयार पनि छन्।
पूर्वाधार विकास तथा समाजिक र आर्थिक परिवर्तनका कारण दशैंको स्वरुप फेरिंदा यसको मूल्य कम भए जस्तो देखिए पनि मोल भने बढिरहेको छ।
सम्झाैं,पकाऊँ, खाऊँ !
बसाइँसराइ, जीवनशैली वा अनेक कारण विस्मृतिमा पुगेका हाम्रा गाउँघरका प्रिय खान्कीहरू अब सम्झेर ल्याउनुपर्ने वेला भएको छ।
स्वादको शक्ति, शक्तिको स्वाद
टिप्पणी केदार शर्मा
सम्पन्नताले हामीलाई चाहेको सामान किन्ने क्षमता त दिन्छ, तर के त्यसमा आफ्नोपन पनि मिसिएको हुन्छ ?
स्वादको कुरा नेपालीमै
हामीसित खानेकुरा चाहिं अनेकथरी छन्, तर तिनको स्वाद र गुण बुझाउने शब्द छैनन् भन्नु स्वयंमा लाजमर्दो अवस्था हो।
के लोक भनेकै ‘लोकल’ हो ?
संघीय संरचनाका हाम्रा स्थानीय सरकारले गर्ने भनेकै आफ्नो गर्विलो पहिचान जोगाउँदै विकासपथमा लम्कनु हो। त्यसका लागि ‘लोक–परिकारका मेनु’ छुटाउनै नहुने कार्यसूची हो।
साधु साधक गएपछि
शिव रेग्मीले संसार छाडे लगत्तै लेखिंदै गरेको यो लेख कहिलेको कुराबाट थालौं ? उनले दाजुको कोटको खल्तीमा चिठी हाल्दिएर घर छाडेको दिनबाट ?
खुलेको फैलिएको दशैं
पूर्वाधार विकास तथा समाजिक र अार्थिक परिवर्तनका कारण दशैंको स्वरुप फेरिंदा यसको मूल्य कम भए जस्तो देखिए पनि मोल भने बढिरहेको छ ।
म चाहिं भाषाविद् होइन
सजिलैसित ‘विद्’ बनाउने/बन्ने चलनले समाजको प्राज्ञिक स्तर र विशेषज्ञताको गुणवत्तामा नराम्रो असर परिरहेको र टपर्टुइँय्यापनको साम्राज्य फैलिइरहेको छ ।
अत्यधिक बहुमतले विजयी नगराऔं
लोकतन्त्रमा राम्रो सरकारका लागि चाहिने सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो– बलियो प्रतिपक्ष । सरकारलाई चुनौती दिनसक्ने राजनीतिक हैसियत हुँदा मात्र प्रतिपक्ष बलियो हुन्छ ।
किन नरमाउने, यो मनसुनमा !
आफ्नो उत्पत्तिसँगै मानव जातिले निरन्तर साक्षात्कार गर्दै आएको मनसुनले यस क्षेत्रलाई जीवन्त बनाएको त छ नै, मानव जीवनलाई धनधान्य पनि बनाएको छ। अनि किन हामी नरमाउने, यो मनसुनमा !
‘असल’ रोज्ने अवसर
निर्वाचनमा भोट खसाएर ‘खराब’ व्यक्ति र प्रवृत्तिहरूलाई पराजित नगरी ‘असल’ हरूले ठाउँ पाउँदैनन् ।
“तपाइँ आफ्नो हैसियत अनुसारकै नेता पाउनुहुन्छ । तपाइँ मतदान गर्नुहुन्न, निर्वाचनमा ध्यान दिनुहुन्न र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्न भने आफ्नो भावना प्रतिबिम्बित गर्ने नेता पनि पाउनुहुन्न ।”
अँध्यारो बिहान, सुखद सूर्यास्त
२०७३ सालको सूर्योदय बडो अँध्यारो भए पनि विस्तारै दिनहरू सङ्लिंदै गएर सालको अन्त्यसम्ममा हामी निकै आशलाग्दो अवस्थामा पुग्यौं। २०७४ अझ राम्रो हुनेछ, किनभने हामी अझ सकारात्मक र अझ सबल हुँदैछौं।
मूर्ति छोई मुस्कान
दादाको शेषपछि नेपाली अक्षर, नेपाली लेखक र नेपाली किताबलाई उहाँले जस्तो आफ्नोपन कसरी दिन सकिएला!
यो लेख लेख्ने क्रममा राष्ट्रकविसित बोल्न मन लाग्यो। फोनमा उहाँले भन्नुभयो, “तपाईं आउनुहोस्, उहाँका बारेमा म धेरै कुरा भन्छु।” मैले इलामबाट फोन गरेको बताएपछि उहाँले त्यसो भए म एकै वाक्यमा उहाँका बारेमा बोल्छु भन्दै आदर र स्नेह भरिएको स्वरमा टिपाउनुभयो, “कमलको फूल झरेर गयो, त्यसको नामको सुवास सधैं मगमगाइरहनेछ।”